Heshiiska Cusub Ee Ole Gunnar Solskjaer Oo Manchester United Ka Caawin Kara Helitaanka Erling Braut Haaland
HomeHoryaalka IngiriiskaHeshiiska Cusub ee Ole Gunnar Solskjaer oo Manchester United ka caawin kara Helitaanka Erling Braut Haaland
August 1, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Germalka, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ku kalsoon tahay inheshiiska cusub ee Ole Gunnar Solskjaer ee Old Trafford uu ka dhigi doono meel adag si ay ugu tartamaan saxiixa Erling Braut Haaland xagaaga soo aadan.
Xidiga reer Norway ayaa u muuqda mid hal xilli ciyaareed oo kale la qaadan doona Borussia Dortmund ka hor inta uusan ka tagin sannadka dambe, markaasoo qandaraaskiisa lagu burburin karo 68 milyan oo ginni.
Chelsea , Barcelona , Real Madrid iyo Manchester City ayaa dhammaantood u tartami kara Haaland sannadka 2022, laakiin sida laga soo xigtay Daily Star , rajada Man United ee heshiiska ayaa kor u qaaday qandaraaska cusub ee Solskjaer.
48 jirkaan, oo qalinka ku duugay heshiis cusub oo seddex sano ah kooxda 20-ka jeer ku guuleysatay horyaalka Ingariiska, ayaa xiriir dheer la leh Haaland, isagoo ku soo maamulay Molde.
Xiddiga reer Norway ayaa dhaliyay 57 gool 59 kulan oo uu u saftay Dortmund tan iyo markii uu yimid Janaayo 2020, oo ay ku jiraan 41 gool 41 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan intii lagu jiray ololihii 2020-21.
21 jirkaan ayaa la rumeysan yahay inuu bartilmaameed u yahay Chelsea oo ku dooneysa 150 milyan oo ginni suuqa hadda jira, laakiin Blues ayay u badan tahay inay ku jahwareersan yihiin baacsiga ay ugu jiraan weeraryahanka dhexe.